के तपाइँ साँच्चिकै सुरुवातको लागि काम गर्न चाहानुहुन्छ? | Martech Zone
के तपाइँ साँच्चिकै सुरुवातको लागि काम गर्न चाहानुहुन्छ?
बिहीवार, जनवरी 8, 2009 आइतबार, जुन 21, 2015 Douglas Karr
तपाईको कामबाट बाहिर निस्केको भन्दा तपाईको पेटमा भावनाको नराम्रो अवस्था छैन। U बर्ष भन्दा पहिले मैले क्षेत्रीय समाचार पत्रमा काम गर्दा मलाई अनियन्त्रित रूपमा बुट दिइयो। यो मेरो जीवन र क्यारियर को एक महत्वपूर्ण बिंदु थियो। मैले निर्णय गर्नुपर्‍यो कि म लडाईमा जान्छु कि म धेरै सफलतामा पछाडि पछाडि थिएँ- वा नभए पनि म तल झेलिरहेको छु।
पछाडि फर्केर हेर्दा मेरो अवस्था इमान्दारै भाग्यशाली थियो। मैले मरिरहेको एउटा उद्योग छोडिदिएँ र एक कम्पनी छाडिदिए जो अहिले चिनिन्छ काम गर्न सबैभन्दा नराम्रो रोजगारदाता मध्ये एक.
एक स्टार्टअप कम्पनीमा, सफलताको अनौंठाहरू तपाईको बिरूद्ध स्ट्याक हुन्छन्। कर्मचारी लागत र रिटर्न एक स्टार्टअप कम्पनीले गर्न सक्ने सबैभन्दा वाष्पशील लगानी हो। एक महान कर्मचारी एक व्यवसायको गगनचुम्बीन गर्न सक्दछ, गरिब हायरिंगले यसलाई गाड्न सक्छ।
केहि सफल सुरुवातमा शुरू हुन्छ, यद्यपि। कर्मचारीहरू जो एक दिन महान थिए तिनीहरूलाई अर्को जान दिन आवश्यक पर्न सक्छ। १०, २,, १००, ,००, इत्यादिको साथ पाँच कम्पनीको कम्पनी एकदम भिन्न छ।
पछिल्ला years बर्षमा, मैले start स्टार्टअपमा काम गरें।
एउटा स्टार्टअपले मलाई पछाडि सार्‍यो ... प्रक्रियाहरू र व्यवस्थापन तहहरूले मेरो गाँस गुमाए र मैले छोडिनुपर्‍यो। यो उनीहरूको गल्ती थिएन, यो वास्तवमा कम्पनीमा मसँग 'फिट' थिएन। तिनीहरूले धेरै राम्रो गर्न जारी राख्छन् र अझै पनि मेरो सम्मान छ। म त्यहाँ अब हुन सक्दिन
अर्को स्टार्टअपले मलाई घेर्यो! मैले कुनै न कुनै उद्योगमा काम गरें, कुनै कम्पनीमा कुनै स्रोत छैन। मैले आफ्नो क्यारियरको एक वर्ष दिएँ र उनीहरू सबै मेरो सबलाई दिएँ - तर म जारी राख्नको निम्ति कुनै मार्ग थिएन।
म अब एक स्टार्टअपको साथ छु जुन मलाई धेरै सहज लाग्छ। हामी अहिले करीव २ employees जना कर्मचारी छौं। म आशावादी भन्छु कि यो त्यस्तो कम्पनी हुनेछ जुन म निवृत्त हुन्छु; यद्यपि, अनौठोहरू मेरो विरुद्धमा छन्! जब हामी केहि सय कर्मचारीहरुमा हिर्काउँछौं, हामी देख्न सक्दछौं कि म कसरी सामना गर्न सक्छु। यस पटक, म कम्पनीको सफलताको कुञ्जी हुँ त्यसैले म नोकरशाहीको 'मैदानको माथि' रहन सक्छ र ठूलो बृद्धिबाट चपलता र प्रगति कायम राख्न कडा मेहनत गर्न सक्छु।
केही व्यक्तिहरूले सोच्न सक्छन् कि स्टार्टअप क्रूर रोजगारदाता हो यदि उनीहरूसँग उच्च कर्मचारी मन्त्र छ भने। म त विश्वास गर्दिन ... कुनै मंथनको साथ स्टार्टअपहरूले मलाई धेरै चिन्ता गर्दैन। एक स्टार्टअपको जीवनमा चरणहरू छन् जुन स्थापना कर्पोरेसनको तुलनामा बिजुलीको गतिमा काम गर्छन्। तपाईं केहि कर्मचारी बाहिर लाउन जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईं अझ बढि जाँदै हुनुहुन्छ। दुर्भाग्यवश, स्टाफ आकारहरू सुरुमा सानो हुन्छ त्यसैले तपाईंको पार्श्व चालहरूको सम्भावना कुनै पनि स्लिम हुँदैन।
यो निर्दयी लाग्न सक्छ, तर म बरु एक स्टार्टअप टर्नओभर आधा कर्मचारी यो सबै गुमाउनु भन्दा छ।
त्यसोभए ... यदि तपाईं वास्तवमै स्टार्टअपको लागि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको नेटवर्कलाई नजिक राख्नुहोस् र तयारीमा केही पैसा राख्नुहोस्। अनुभवबाट जति सक्दो सिक्नुहोस् - एक स्वस्थ सुरुआतमा एक बर्षले तपाईंलाई एक दशकको अनुभव प्रदान गर्न सक्छ। सबै भन्दा, एक बाक्लो छाला प्राप्त।
बरु म सुरुको लागि काम गर्ने छैन? ओह ... होईन। उत्साह, दिन प्रतिदिन चुनौतिहरू, नीतिहरूको गठन, स्टाफको बृद्धि, एक प्रमुख ग्राहक अवतरण ... यी सबै आश्चर्यजनक अनुभवहरू हुन् जुन मँ दिन चाहन्नँ!
तपाईं कस्तो महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्, यदि तपाईं ढोकामा जानुहुन्छ भने अचम्म नमान्नुहोस्, र अर्को ठूलो अवसरलाई आक्रमण गर्न तयार हुनुहोस् जुन अनमोल अनुभवले तपाईंले निर्माण गर्नुभयो।
सेत Godin म संग सहमत!
के ट्विटरको ग्रोथ मेटर छ?
जनवरी 8, 2009 मा 2: 38 एएम
यी सबै घण्टीहरू सत्य छन्! म निश्चित रूपमा यी धेरै बिन्दुहरूलाई प्रमाणित गर्न सक्दछु, १० कर्मचारीहरूसँग सुरुआत बिभिन्न रूपमा सञ्चालन हुन्छ जब यसको केही सफलता हुन्छ र १०० कर्मचारीहरू हुन्छन्।
एउटा कुरा मैले याद गरेँ कि सानो स्टार्ट अप्सको लागि काम गरिरहेको छ त्यसले मलाई बर्बाद गर्यो! म आफैँले दैनिक ग्रिडमा फिर्ता जाने कल्पना गर्न सक्दिन।
जनवरी 8, 2009 मा 2: 56 एएम
राम्रो पोष्ट! मैले मेरो सम्पूर्ण क्यारियर स्टार्टअपको लागि काम गरें र म स्टार्टअपको बारेमा मेरो ब्लगको लागि लेख लेख्छु।
त्यहाँ स्टार्टअप संसारको केही चिसो कडा तथ्यहरू छन् जसले विचार गरिरहेका छन् उनीहरूले थाहा पाउनुपर्दछ:
१. स्टार्टअपको लागि काम गर्नु जुवा ईभन हो यदि तपाईं पार्टनर / मालिक स्तरमा हुनुहुन्छ भने। एउटा स्कम्ब्यागले सम्पूर्ण संस्थालाई बिगार्न सक्छ। मैले अनगिनत स्टार्टअपहरू असफल भएको देखेको छु, किनकि एक संस्थापकले अहंकार-संचालित निर्णय गरे केवल कम्पनीको अपूरणीय रूपमा क्षति पुर्‍याउने।
२. ठूला निगमहरूको तह तल करिब 2०% तल हुन्छ। लाभहरू तुलना गर्न सकिँदैन (धेरै जसो समय)।
Most. धेरै जसो समय, कार्य हप्ताहरू कर्पोरेट संसारको भन्दा धेरै लामो हुन्छन्।
Pro. सम्भावना तपाईको कम्पनी तपाईको कार्यकालमा जानेछ ... करीव %०% (संख्यामा कसले अनुसन्धान गर्‍यो भनेर निर्भर गर्दछ)।
You. तपाई कि त पागल हुनुहोला, रमेन चाउचाउ जस्तो, वा बचत गर्नुपर्दछ जसले तपाईंलाई जोखिम प्रदान गर्दछ।
मसँग शुरुवातमा नेतृत्व कार्यहरू छन् जुन २ बर्षमा २० देखि १०० व्यक्तिमा बढेको थियो (र अझै बढ्दै छ) अर्को that महिनामा १०-20० बाट गयो (तिनीहरू अझै पनि व्यवसायमा छन्)। तर मैले एउटा बन्द गर्नुपर्‍यो र अर्को छोड्नुपर्‍यो, किनभने मलाई थाहा छ तिनीहरू फेरि अन्तर्गत जान्छन्। तपाईं अस्थिरता ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ?
स्टार्टअप संसार उनीहरूको लागि हो जुनसँग यसको पेट हुन्छ र अत्यन्त लचिलो हुन इच्छुक छन्। यदि तपाईं हुनुहुन्न भने टाढा बस्नुहोस्।
यो रेष्टुरेन्ट व्यवसाय जस्तै हो, सबै राम्रा / रोमान्टिक / बाहिरबाट प्यारो, तर भित्र भित्र शुद्ध। जो कोही जसले तपाइँलाई अन्यथा भन्छ कि या त उच्च छ, तपाइँलाई थाहा छ के थाहा छ, वा धेरै कूलेड पियो।
जनवरी 8, 2009 मा 8: 58 एएम
Apolinaras - यसमा तपाईंको इनपुटको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। निश्चित रूपमा यो एउटा रमाईलो जीवन हो - युवा वयस्कहरूले आफ्नो पहिलो रोजगारमा ठूलो फरक बुझ्न आवश्यक छ।
जनवरी 8, 2009 मा 3: 51 एएम
म सामान्यमा स्टार्ट अपको बारेमा तपाईंको दृष्टिकोणसँग सहमत छु। यद्यपि यो भन्नु आवश्यक छ, सुरुमा सम्पूर्ण अनुभव संस्थापक (हरू) को नेतृत्व क्षमतामा आधारित हुन्छ।
गरीब नेतृत्व र औसत व्यवस्थापन कौशल मुनि यो कुराको लागि सामान्यतया खराब अनुभव हुन्छ जब राम्रो नेतृत्व र माथिको औसत व्यवस्थापन क्षमताले अनुभवलाई सार्थक बनाउन सक्छ कि व्यापार सफल भयो वा असफल।
जनवरी 8, 2009 मा 9: 03 एएम
मलाई निश्चित छैन 'सम्पूर्ण' अनुभव संस्थापकहरूमा छ। धेरै पटक संस्थापकहरू उद्यमी र विचार व्यक्ति हुन्छन्। कहिलेकाँही तिनीहरू भाँडामा बिक्री, बिक्री, बजार, पैसा स raising्कलन, अपरेसन, आदिमा राम्रोसँग गोल हुँदैनन् - मलाई लाग्दैन कि तपाईं उनीहरूमा सबै सीपहरू नभएकोमा दोष दिन सक्नुहुन्छ।
स्टार्टअपहरूलाई एउटा अंग बाहिर जान र प्रतिभामा ठूलो लगानी गर्न बाध्य तुल्याइन्छ - केही काम, केहि ईमानदारीसाथ गर्दैन। अपोलिनेरसको भनाइ छ, यसले सम्पूर्ण कम्पनीलाई लिन सक्दछ।
संस्थापकहरूले आफूसँग भएको सबै भन्दा राम्रो गर्न सक्छन्। कहिलेकाँही यो पर्याप्त छैन। यो एक स्टार्टअप को जोखिम हो!
जनवरी 8, 2009 मा 10: 01 एएम
राम्रो लेख! र त्यसपछिका टिप्पणीहरू। मलाई लाग्छ कि स्टार्ट अपहरू ग्लैमराइज गरिएको छ र सरल देखिने बनाउनको लागि। यदि तपाइँ वास्तवमै र घर व्यापार भन्दा बढि विकास गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो एकदम पेटको रेन्चिंग हुन सक्छ। जब तपाईं एकको लागि काम गर्न जानुहुन्छ, तपाईं मालिकहरूसँग उच्च र लासहरू अनुभव गर्न तयार हुनुपर्दछ।
यद्यपि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ बुझ्नुहुन्छ, तपाइँ त्यहाँ हुनु अघि ...
जनवरी 8, 2009 मा 11: 39 एएम
वास्तवमै उत्कृष्ट लेख र समयसँगै। जब म छु तबदेखि बढ्ने बारे सोच्दै छु किनभने मलाई थाहा छैन ममा के-कस्ता वृद्धि छन्। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन म सिक्न चाहन्छु र सक्दिन जब सम्म हामी त्यसमा क्लाइनिस्ट बेच्न सक्छौं। एचआर उद्योगको साथ काम गर्दा यो चुनौती हो।
जे होस्, opoprtune मैले देखेको छु कि त्यसले मलाई यो भन्दा पनि ज्यादा सोच्यो एक स्टार्टअप विज्ञापन एजेन्सी हो .. मेरो घरबाट सडकको नीचे सडक। यो लेखले मलाई अर्को केहि महिनामा मलाई सोच्न लगाउँछ र मेरो हृदय कहाँ छ भनेर हेर्न गइरहेको छ।
जनवरी १, २०१ 8 १२::2009 अपराह्न
उत्कृष्ट पोष्ट यो मबाट बाँचेको म सानो कम्पनीमा प्रभाव पार्ने बनाउन सबै काममा लिएको छु - er, work - at। एक सुरुवात होईन, तर सँधै विकसित।
मैले दुई बर्ष पहिले स्नातक गरेँ र धेरै स्टार्टअपमा भाडामा लिनको लागि प्रयास गरे। मलाई समस्या छ मलाई जहिले पनि मेरो कला र कार्य नैतिक सुरुवातको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। मलाई आशा छ कि एउटा शुरू गर्न वा अर्कोको लागि मेरो अर्को स्थितिमा काम गर्न, जब यो हुन सक्छ।
मलाई लाग्छ स्टार्ट-अपको लागि काम गर्ने उत्कृष्ट हुनेछ। तर यो पनि विचार हो कि म एक उद्यमी हुन चाहान्छु र यसले मलाई उतार-चढाव र व्यस्त जीवनशैलीको आनन्द लिन्छ। त्यो के हो भने म सुरुआतमा हेर्न चाहन्छु जुन मलाई लाग्दैन धेरै ठूला निगमहरूले मलाई दिन्छन्।
तर म देख्न सक्दछ कि त्यो जीवनशैली सबैको लागि कसरी फिट हुँदैन यसैले यो तपाईको क्यारियरमा खोजिरहनु भएकोमा निर्भर गर्दछ।
राम्रो पोष्ट, सामान्य जस्तो।
म तपाईंसँग सामान्य रूपमा सहमत छु।
तर, थप पोइन्ट्स को एक जोडी हो:
१) यो विवाह हो - म दिन्छु, तपाईं दिनुहोस्।
कहिलेकाँही त्यो सुरुवातमा हराउँदछ। स्टक विकल्पहरू यसमा सकारात्मक सुनौलो हड्डीहरू हुन सक्छन्, तर स्टार्ट-अपको धेरै हड्तालको मूल्यका साथ माथी मात्रा तुरुन्तै उनीहरूको कर्मचारीहरूसँग भिन्रै देखिन्छ, विशेष गरी किनभने सुरु-मा सामान्यतया तलब बजार औसतमा हुँदैन।
२) व्यक्तित्व बनाम प्रदर्शन
दुर्भाग्यवस, प्राय: स्टार्ट-अपको व्यक्तित्व र इन्सुलर निर्णय-ले नेतृत्व गर्दछ जुन भाँडामा लिने र गोलीबारीमा प्रभाव पार्दछ। तपाइँ चाहानुहुन्छ कि यो प्रदर्शन आधारित हुनेछ
)) नेतृत्व कुञ्जी हो
एक उद्यमीसँग सबै सीपहरू हुनुपर्दैन, तर उनीहरूसँग आफ्ना कमीहरू मिल्छ र अर्थपूर्ण तरिकामा उनीहरूको वरिपरि मानिसहरू सुन्न बुद्धि हुनु आवश्यक छ।
)) कर्मचारी बढाउने
यो कागजमा राम्रो लाग्दछ, तर पक्कै पनि त्यो कर्मचारीलाई थाहा छैन जसले आफ्नो कौशलता कसरी चालमा राख्दैन विशेष गरी यदि नेतृत्व र कर्मचारी युवा छ भने पूर्ण कौशल बिना नै सोधपुछबाट आफूलाई पृथक बनाउँदछ, अक्सर जस्तो। एक प्रारम्भिक चरण कम्पनी मा मामला।
)) व्यक्ति #5को लागी बाहिर हेर्नुहोस्
स्वैच्छिक नभएको उच्च स्टाफको कारोबारको नकरात्मक परिणाम राम्रो छैन। डरको माध्यमबाट प्रेरणा कहिल्यै स्वस्थ हुँदैन। व्यक्ति आफ्नो अर्को काम दिमागमा रोजगारमा जान सक्दैनन्, त्यसैले यदि साथीहरू खस्छन् भने बायोडाटा बढाइनेछ।
समग्रमा, फेरि, म तपाईको धेरै कुरासँग सहमत छु, तर मलाई लाग्छ कि तपाई यसमा गुलाबी चश्माका साथ हेर्नुहोस्।
सुरूवातहरू जुन हालको युगमा सब भन्दा सफल भएको छ (गुगल) कामदारहरूलाई आदरपूर्वक व्यवहार गर्दछ, भाडामा लिने हातहरू विवेकी उपकरणको रूपमा प्रयोगको रूपमा प्रयोग गरिदैन।
कुरा जुन म सँधै स्टार्ट-अप वातावरणमा फिर्ता आउँदछन् त्यो सम्बन्ध हो - यदि तपाईं आफ्नो नेतृत्वको साथ एक र्यापोर्ट र साझा मैदान निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ भने यो फिट हो। यदि तपाईंको नेतृत्व एक्लो, स्टन्डअफिश, नेट-नेट, काटिएको र सुकेको छ र तपाईंलाई आफ्नो टाउको स्क्र्याचिंग छोड्छ यदि तपाईं २ वा X एक्सको गुणनखण्डको तौलबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने उनीहरूले यसलाई पाउँदैनन् र तिनीहरूको बेइज्जत हुन्छन्। आफ्नै अहंकार र असुरक्षा।
एक स्टार्टअप र एक स्थापित कम्पनी बीच मात्र निश्चित फरक संगठन को उमेर हो।
त्यसबाहेक, कुनै पनि कम्पनीले कर्मचारीहरूबाट लामो घण्टा माग गर्न सक्दछ, नि: शुल्क लंच प्रस्ताव गर्न सक्दछ, मानिसलाई नराम्रो क्षतिपूर्ति दिन वा नयाँ विचारहरू स्वीकार्न। उद्यम समर्थित स्टार्टअप को बैंक मा लाखौं हुन सक्छ, र १०० वर्ष पुरानो कम्पनीहरु कैशफ्लो मुद्दाहरु को सामना गर्न सक्छन्। शानदार र भिक्षु प्रबन्धकहरू जताततै लुकेका छन्।
कम्पनीको उमेरले तपाइँको क्यारियर निर्णयहरू सूचित गर्नुपर्दैन, तर संस्कृति र संगठनको ती व्यक्तिको विश्वास। तपाईं एक स्टार्टअप को लागी काम गर्न चाहानुहुन्छ कि भनेर सोध्नुहोस्। पत्ता लगाउनुहोस् कुन गुणहरू जुन तपाईलाई उत्साहजनक कम्पनीहरूमा सबैभन्दा आकर्षक लाग्छ। निगमितको मिति बेवास्ता गर्नुहोस् र तपाईंको सपनाहरूको अनुसरण गर्नुहोस्।
म आदरपूर्वक असहमत छु, रबी।
उमेर मात्र फरक छैन। प्राय: स्टार्टअपहरूले सीमित वित्तीय र मानव संसाधनहरूको साथ fromण लिने पैसाबाट काम गरिरहेका छन्। तिनीहरू बढ्न र सकेसम्म चाँडो सकारात्मक नगद प्रवाहमा पुग्न ठूलो दबावमा छन्।
कम्पनीको सुरूमा शुद्ध अस्तित्व द्वारा संस्कृति र विश्वासहरू धेरै टाढा छन्। कुनै पनि ठूलो कम्पनीमा हेर्नुहोस् जुनसँग तपाईंले खोजिरहनु भएको संस्कृति र विश्वास छ र म केही हदसम्म जुवा खेल्नेछु कि उनीहरूसँग ती अवसरहरू थिएनन् जब उनीहरू नगदका लागि ppedणमा डुबेका थिए, र शोजी लगानीकर्तालाई जवाफ दिँदै!
मेरो काममा केही परोपकारी र 'हरित' समर्थकहरू छन्, तर हामीसँग विश्व परिवर्तन गर्न मद्दत गर्न कुनै लाभ छैन (अझै)।
जनवरी १, २०१9१२::2009 अपराह्न
तपाइँका कथनहरूले तपाइँको मुख्य थेसिसलाई चित्रण गर्दछ जुन मलाई विश्वास छ कि दाबी गर्न को लागी छ कि जवान र पुरानो संगठनहरु बीच नाटकीय, मौलिक र प्रभावशाली अन्तर छ। जे होस्, म निम्न नोट गर्दछु:
तपाईं कम्पनीहरूको बारेमा लेख्नुहुन्छ जुन "सीमित वित्तीय र मानव संसाधनको साथ orrowण लिने पैसाबाट काम गर्दैछ।" तिनीहरू बढ्दो दबाबमा छन् र सकेसम्म चाँडो सकारात्मक क्यासफ्लोमा जान। " यो ठूलो तीन automakers को वर्णन जस्तै लाग्छ, धेरै विफल बैंकिंग संस्थानहरु मध्ये एक, वा वास्तवमा कुनै पनि स that्घर्ष गरिरहेको कम्पनी यो स्टार्टअपमा विशेष छैन।
तपाईं यो पनि पोष्ट गर्नुहुन्छ कि "कम्पनीको सुरुमा शुद्ध अस्तित्वले संस्कृति र विश्वासहरूको संख्या बढी छ।" तर बाँच्न असफलता के छैन जसले तपाईंलाई अखबारको व्यवसायको एक विशाल कम्पनीबाट रोक्दछ? तपाईले भन्न खोज्नुभयो कि यो काम गर्नको लागि डरलाग्दो ठाउँ हो तर समाप्ति थालनी गर्ने तपाईं हुनुहुन्न।
अन्तमा, तपाईको तेस्रो पोइन्टले सामग्रीमा यस्तो देखिन्छ कि "संसार परिवर्तन गर्न" लाई नाफाको आवश्यकता पर्दछ। Kiva, फ्रिनेट र अवश्य पनि जीएनयू / लिनक्स सबै स्टार्टअपहरू हुन् जसले आफ्नो फाइदाहरूको लागि धेरै सोचविचार नगरी पहिले नै संसारलाई फाइदा पुर्‍याएको छ।
मेरो आफ्नै बिषय फरक छ। जहाँसम्म हुन सक्छ केही अत्यधिक सहकार्य गुणहरू, एक स्टार्टअप कम्पनीहरू र परम्परागत नियोक्ताहरू बीच मात्र पूर्ण ग्यारेन्टी फरक उमेर हो। म कसैलाई चुनौती दिन सक्छु जो शुरुवातमा रोजगारीको पछि लाग्ने (वा बेवास्ता गर्ने) सोचिरहेछ आफैलाई सोध्न जुन उमेरको बारेमा कुन मान्यताहरूले आफ्नो दृष्टिकोणलाई सूचित गरेको छ।
मलाई लाग्दैन कि यो सन्देश केवल शैक्षिक वा पेडेन्टिक हो। जब तपाईं कहाँ काम गर्न चाहानुहुन्छ भनेर निर्णय लिँदा कम्पनी उमेर एक अव्यावसायिक ठाउँ सुरु हुन्छ। बरु, एक व्यक्ति उद्योग, मूल्य, काम नैतिक, कार्यस्थल संस्कृति, र प्रत्येक व्यक्तिको संगठन मा तपाइँले भेट्ने ती व्यक्तित्वको विचार गर्नुपर्छ।
स्टार्टअप वा परम्परागत उद्यमहरूको लागि वस्तु प्राथमिकता, मेरो विचारमा, आयुवादको एक प्रकार हो। भेदभावजनक रोजगारीका रूपमा, हामीले रोजगारदातालाई अर्थपूर्ण मापदण्डको आधारमा मूल्या should्कन गर्नुपर्छ। यसले समावेशीकरणको मिति समावेश गर्दैन।
म विगत months महिनाको लागि स्टार्ट-अपको लागि काम गर्दै छु र यसको मज्जा लिनुहोस्। हामी हाम्रो न्यूनतम संसाधनहरू साइट पुन: डिजाइन र कोडिod सुधारहरूमा राख्दै छौं। अर्को वर्षको भविष्यसँग मेरो लागि धेरै उत्साह छ जुन स्टार्टअपमा रहेका मानिससँग हुनुपर्दछ। मलाई थाहा छ त्यहाँ अझ काम आउने छ र आगामी months महिनामा साइटलाई थप धक्का दिईन्छ, तर आशा छ कि यसले भुक्तान गर्नेछ र मैले यो लगाउदिन। यो सबैका लागि होईन, तर मँ परम्परागत जागिर चाहान्दिन।